LOHATENY FIDERANA | VAOVAO FOTOTRA
Ny fizaran'ny vondron-tsofina.news (antsoina koa hoe safidy) dia mihevitra ny tenany ho tambajotra sosialy misy dikany. Mazava ho azy fa mila fitsipiky ny lalao ihany koa izay miaro anao sy izahay amin'ny fandoroana. Ny fampiasana tsy fampiasa amin'ny fampiasa amin'ny fampahalalana manokana dia tsy takatry ny saintsika. Ity ny fanambarana fiarovana ny angona.
misy zavatra mbola ho avy